ဘရှင်, ဗိုလ်မှူး (၁၉၆၆). "ပုဂံခေတ် ဖွားစောများ" (in မြန်မာဘာသာ). ရန်ကုန်: နိုင်ငံသမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မင်းပြောက်_သီဟပတေ့&oldid=549318" မှ ရယူရန်
၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။